Meya weC13e weruwa reParis anoshamwaridzana nevashambadziri vakasununguka-Tech - Numerama - TELES RELAY
HOME » TECH & TELECOM "Meya weC13e weruwa reParis anoshamwaridzana nevatengesi vasingasviki-Tech - Numerama
Jérôme Coumet anodyidzana nevanokonzera magetsi.
« Vashandi vanogadzira magetsi, tarisai mumaziso angu ". Hakusi pasina chivimbo chokuti Jérôme Coumetsocialist meya we 13e arrondissement yeParis, anotanga video yake pfupi yakataurirwa Lime, Bird, Bolt, Voi uye vamwe Jump iyo inowanda mumigwagwa yeParis. " Vatsigiri vemagetsi vakamira zvakanyanya pamigwagwa, iyo yapfuura Anoenderera mberi sezvaanoona mutsara we scooters kubva kuLime kumashure kwegori riri shure kwake. Direction? Izvo zvinoshandiswa, sezvakasarudzwa zvinotsanangura zvishoma zvishoma muvhidhiyo.
« Basa redu nderekudzivirira rusununguko rwevanofamba-famba kuti vafambe vakanyarara mumigwagwa ", Anowedzera mune yechipiri tweet. Kukurukurirana kwakapoteredza kubatwa kwekutorera ndeimwe yekutanga kuParis. Kusvika ikozvino, Imba yeParis City nematare emaguta takaita kadhi yekushivirira nemishonga. Zvimwe zvakanga zvakanyanyisa.
Tinoonga kuvaridzi vanozoita mapurisa emapurisa emapisisiti matsva pamabasa avo
Basa redu nderekudzivirira rusununguko rwevashandi vanofamba-famba kuti vafambe vakanyarara mumigwagwa. pic.twitter.com/rMlMUYDXOd
- Jérôme Coumet (@jerome_coumet) Dai 17, 2019
Chiito pamberi pemutemo
Kune zvose izvi, kero yemugwagwa kana kweteparking kunenge iri dambudziko uye iri kumaguta kuti atarise matanho kana zvigadzirwa. Nepo kune iko kakatova nezviuru zve scooters mumusoro uye nhamba ye40 000 mienzaniso inogona kusvika nekukurumidza, mubvunzo wenzvimbo yavo mumamiriro emaguta aripo. Nhasi, zvinouya kuburikidza nemazano emitemo iyo mahofisi eguta racho anoronga kugadzirisa mubvunzo we free floating. MuParis, chibvumirano chakanaka chinokurudzirwa: vashandisi havapaki zvikoro munzvimbo dzavanovhara ndima yacho, vachimirira nzvimbo dzakatsaurirwa kumichina iyi.
Lime scooters mumugwagwa muParis // Source: Marie Turcan kuNhamba
Asi ani zvake akatamira kuParis mu2019 anogona kungoona kupesana pakati pezvokwadi uye zvipikirwa izvi zvakanaka: scooters ari pose pose, akabatanidzwa, akagumburwa pasi, akaiswa chero kupi zvayo pamigwagwa yakamanikana. Kupfuura dambudziko rezvakatipoteredza rinomiririrwa nenzira idzi dzekutakura zvakakurumidza kuparara, isu nokukurumidza tinoona kukwanisa kwayo kukanganisa ndima. Usingarevi kukasvibiswa kwekunzwika kunobudiswa nemapurisa anokonzerwa nokukurumidza kana munhu anofamba anofamba navo.
Mutungamiri Coumet anotungamira uye anoti nguva dzose mazendo achaitwa nevakuru vemunharaunda kuti vabvise vatengesi " rakamira parutivi ". Rinoramba richiziva kuziva kwe " rakamira parutivi Kune mapurisa, sazvino, hakuna chinhu chakanyorwa mudombo kuti rongedze ramangwana remichina iyi.
Wakatarisana naNumera kuti uwane mamwe mashoko pa17h22, basa rekudhinda reimba yeguta re13e rakanga raenda kare kwevhiki.
🛴 Unoremekedza mitemo iyi yose here? pic.twitter.com/cOEVgW6qpG
- Numerama (@Numerama) Dai 17, 2019
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.numerama.com/tech/514275-le-maire-du-13e-arrondissement-de-paris-sevit-avec-les-trottinettes-en-free-floating.html?utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=514275